Isicelo Sokuxhaswa Ngezimali Kwephrojekthi - Ipulatifomu Yesineke Yomhlaba Wonke Yokungezwani Nomzimba Nomoya
Ikhaya>Isicelo soxhaso lwephrojekthi
Isicelo soxhaso lwephrojekthiIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-11-03T17:05:56+01:00
I-GAAPP iyajabula ukukunikeza uxhaso lwezezimali kumaphrojekthi akho. Senza ukuthi imali etholakalayo yephrojekthi itholakale unyaka nonyaka lapho amalungu e-GAAPP angahambisa khona Isicelo Sezimali. Amaphrojekthi kufanele akhombise Injongo Nezinjongo ze-GAAPP
Ngaphambi kokufaka isicelo sikukhuthaza ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi uyafunda futhi uyayiqonda Inqubomgomo Yoxhaso Lomklamo we-GAAPP
Izinhlangano ezingamalungu kuphela ingahambisa izicelo zoxhaso.
Ukuze uthumele isicelo soxhaso, inhlangano engamalungu kufanele ngabe ube yilungu le-GAAPP okungenani izinyanga eziyisithupha, idethi yokuvunywa kweBhodi njengelungu.
Ukuze kubhekwe, inhlangano kumele ikukhombise lokho ibambe iqhaza futhi yazibandakanya neGAAPP ngobuqotho okungenani emkhankasweni owodwa, emhlanganweni, noma esenzweni sokuqala.
Izinhlangano ezingamalungu zingahambisa isicelo soxhaso nganoma yisiphi isikhathi kepha izicelo zezimali zizobuyekezwa kuphela yiBhodi ngoJanuwari nangoJuni.
Ukubuyekezwa kwemali kaJanuwari: Izicelo zikaJanuwari kumele zithunyelwe ngoDisemba 15.
Ukubuyekezwa kwemali kaJuni: Izicelo zikaJuni kumele zithunyelwe ngoMeyi 15.
Isicelo esisodwa kuphela soxhaso lwenhlangano engamalungu esizocatshangelwa emjikelezweni wokuxhasa ngezimali wezinyanga eziyisithupha.
I-GAAPP izoxhasa kuphela kufika ku-25% wanoma iyiphi iphrojekthi enikeziwe futhi izicelo zoxhaso kumele zikhombise imithombo yezimali yamanye ama-75% oxhaso.
Akukho zimali zosuku lokuqwashisa umhlaba ezizonikezwa njengoba i-GAAPP ifisa izinhlangano ezingamalungu ayo ukuthi zibambe iqhaza emikhankasweni yomhlaba yeGAAPP uqobo yezinsuku zokuqwashisa umhlaba.
Izicelo zoxhaso kumele:
Nikeza isabelomali esinemininingwane enengqondo efaka zonke izindleko ezilinganisiwe zephrojekthi. Isabelomali kufanele sifake izindleko eziphelele zephrojekthi kanye nezigaba ezinkulu (isb. Izindleko ezihambisana nentuthuko, ukulethwa, izinsiza kusebenza, abasebenzi). Njengoba i-GAAPP ixhasa kuphela kuze kufike kuma-25% kwanoma iyiphi iphrojekthi, khombisa imithombo yemithombo yemali engaba khona engama-75% asele.
Zibophezele ekuhlinzekweni kombiko ngephrojekthi njengobufakazi bokuziphendulela, kungakapheli izinyanga ezintathu ngemuva kokuphothulwa kwephrojekthi.
Faka amagama nezikhundla enhlanganweni engamalungu amalungu amabili aphezulu asayina isicelo soxhaso.
Yisho isikhathi sephrojekthi ubalule ukuthi wonke amaphrojekthi kumele aqedwe kungakapheli unyaka owodwa.
Isicelo soxhaso lwephrojekthi: Ifomu Lokufaka Isicelo
Uhlu Lokuhlola Lokuqala:
Uhlu Lokuhlola Lokuhambisana *
Uma ungaqiniseki nganoma iyiphi into yalolu hlu sicela uxhumane nathi ku-info@gaapp.org
Ngimele inhlangano yeLungu le-GAAPP-
Inhlangano yami ibe yilungu le-GAAPP izinyanga ezingaphezu kwezingu-6 futhi ibambe iqhaza ngobuqotho okungenani emkhankasweni owodwa we-GAAPP, emhlanganweni, noma esenzweni.
Inhlangano yami ayisathumelanga isiphakamiso soxhaso lwephrojekthi kuGAAPP ezinyangeni eziyisithupha ezidlule.
Ngiyaqonda ukuthi i-GAAPP izoxhasa kuphela kufika ku-25% wesamba sephrojekthi.
Angihambisi isiphakamiso somcimbi woSuku Lomhlaba Wonke.
Ngizoyivuma i-GAAPP kufaka phakathi uphawu lwayo ezintweni zokuxhumana zeprojekthi futhi ngizoyivuma i-GAAPP njengomxhasi kunoma yikuphi ukukhishwa kwabezindaba (okudijithali noma okuphrintiwe).
Ngizothumela umbiko kwiGAAPP okungenani ezinyangeni ezi-3 ngemuva kokuphothulwa kwephrojekthi.
Igama lenhlangano *
Kuthunyelwe ngu- *
Sicela uphendule kafushane futhi ngamafuphi. Akudingekile ukubhala isiphakamiso eside, uma sidinga imininingwane ethe xaxa mayelana nanoma iyiphi iphuzu elithile lesicelo sakho i-GAAPP izokuthinta uqobo. Ungathumela futhi noma imiphi imibhalo engezansi ukugcwalisa imininingwane yakho.
Ziyini izinhloso zephrojekthi futhi zizohlangabezana kanjani nezidingo ezingafinyelelwanga emphakathini wakho? *
Izinhlamvu eziyi-1000 ubuningi.
Chaza uhlaka lwephrojekthi nokuthi uzokwenzenjani ukufeza lokhu *
Izinhlamvu eziyi-1000 max .. Bulletpoints zilungile
Uzowukhuphula kanjani umsebenzi futhi uzozuzisa kanjani umphakathi weGAAPP wonkana? *
Chaza ukuthi uzohlaziya kanjani umthelela futhi ulinganise impumelelo. *
Chaza umugqa wesikhathi wesiphakamiso (isb. Isikhathi sokukhiqiza, usuku lokuqalisa, njll.) *
Izinhlamvu eziyi-1000 max .. Uhlu olulula luhle. Sibuyekeza iziphakamiso ngoJanuwari nangoJuni.
Izindleko eziphelele zephrojekthi *
Isabelomali sephrojekthi *
Faka ku-USD noma ku-EUR
Inani eliceliwe kwiGAAPP *
I-GAAPP izoxhasa kuphela kufika ku-25% yenani eliphelele lanoma iyiphi iphrojekthi enikeziwe.
Ngabe uzoxhasa kanjani amanye ama-75%? *
Uhlu lwabaxhasi ngamanani
Yabelana nathi nganoma yimuphi umqulu ocabanga ukuthi uzosisiza ukuthi siqonde iphrojekthi yakho, ukuthi ixhaswa kanjani nokuthi i-GAAPP izokwamukelwa kanjani.
Layisha noma iyiphi idokhumenti esekelayo (kufika ku-25MB)
Sicela usayine usebenzisa igama lakho eliphelele elisemthethweni, ipasipoti / i-ID, nosuku lokuzalwa. Sidinga isiginesha yamalungu aphezulu e-2 enhlangano yakho.
Ukusayina kweLungu eliPhethe 1: Igama negama leSurename *
Isikhundla enhlanganweni *
Usuku lokuzalwa *
Iphasiphothi noma inombolo ye-ID *
Ngiyavuma ukuthi ukwethula igama lami, i-ID / iPasipoti kanye nosuku lokuzalwa kumele isiginesha esemthethweni
Ukusayina kweLungu eliPhethe 2: Igama negama leSurename *
Ngiyavuma ukusetshenziswa kwalolu lwazi, kufaka phakathi ulwazi lomuntu siqu, ngenhloso kuphela yokuhlolwa kweGAAPP kwalesi sicelo sokuxhaswa nokuthi ngifunde futhi ngayiqonda inqubomgomo yobumfihlo ye-GAAPP nokuphathwa kwemininingwane okukleliswe ezinyaweni zale webhusayithi. *
Khetha u-Yebo noma u-Cha